Wadahadal Halis ah oo ku saabsan Nadiifinta Biyaha
Nadiifi Wabiga Deegaanka (CURE) waxay u shaqeysaa inay dabaaldegto, ilaaliso, oo dib u soo celiso Wabiga Minnesota River Basin. Waxay yihiin hay'ad miyiga ah oo leh aragti guud oo ku saabsan shaqadooda biyaha nadiifta ah, iyagoo bulshada ku dhex jira helitaanka xalalka isbedelka iyo nidaamka xallinta dhibaatooyinka khatarta ku ah deegaanka bay'ada xeebaha ee Minnesota.
Xiriirka CURE ee beelahooda waxay u baahan yihiin in ay noqdaan kuwo dabacsan oo ku filan si ay u qabtaan fursadaha dhiirigeliya saldhiggeena aasaasiga ah. Fursadii ugu dambaysay waxay kacday markii guddoomiyaha Minnesota Mark Dayton uu ku dhawaaqay soo jeedin ah inuu u baahan yahay 50 cagood oo caleemo joogta ah oo ku saabsan dhulalka dhirta ee gobolka oo dhan. Wuxuu difaacay hindisahiisa: "Dhulku wuxuu noqon karaa adiga, laakiin biyaha ayaa iska leh dhammaanteen." Dhowr daqiiqo gudahood wuxuu si buuxda u cusbooneysiiyey wadahadalka ku saabsan mas'uuliyadda tayada biyaha, CURE waxay ogtahay in ay tahay inay shaqeeyaan .
Ololaha la raacay waa tusaalayaal xoogan oo ah waxa dhici kara marka ururku tallaabo hore u qaadayo inuu hogaamiyo hogaaminta arin la xidhiidha luqadda dadka daryeesha. Shakhsiyaadka taageersan oo kaliya CURE ayaa soo gaadhay, iyagoo leh, "Sideen u caawin karnaa? Waxaan rabnaa inaan ku lug lahaano! "Qaar badan ayaa ku taliyay in saaxiibadood ay gaarsiiyaan CURE, oo ay la xiriiraan asxaabtooda iyo asxaabtooda kuwaasoo leh waxyaabo badan oo ay ugu deeqaan ololaha. Shabakadoodu waxay bilaabeen inay koraan, oo ay kaashadaan shaqaale iyo mutadawiciin, laakiin waxay soo saareen bayaanka guddoomiyaha.
CURE waxay bilowday inay qabsato shirarka qorsheynta ololaha si ay ugala hadlaan hindisaha guddoomiyaha iyo macnaha iyo saameynta anshaxa. Kadibna way waydiisteen xubnahooda inay u tabarucaan si ay u taageeraan ololaha siyaabo kala duwan. Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa isu taagay, iyagoo bixinaya inay ka qaybqaataan booqashada guddiga tafaftirka wakhtigaas, ama in ay la kulmaan wada hadal aan habooneyn oo lala galo beeralay deriska ah oo ku saabsan isticmaalka dhulka. Waxay sidoo kale ku bixiyeen magacyo xiriiro kale oo la soo bandhigay si ay u sameeyaan hordhac, iyaga oo intaa ku daray in CURE ay marwalba sii ballaarinayso doodaha biyaha nadiifta ah ee baadiyaha.